Myagdi News - सरकारद्वारा पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने १० रोगको प्राथमिकिकरण - Myagdi News
काठमाडौँ । सरकारले पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने रोगहरूलाई प्राथमिकिकरण गरेको छ । पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने १० वटा रोगलाई प्राथमिकताका आधारमा जुनोटिक सूचीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राखेको हो ।
प्रथम जुनेटिक रोगहरुको प्राथमिकिकरण राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिले १० वटा रोगलाई जुनोटिक रोगमा समावेश गरेको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
सिजनल इन्फ्लुएन्जा, रेबिज, कोरोनाभाइरस, ब्रुसेलोसिस,सालमोनेलोसिस÷लेस्मिनियासिस, जुनोटिक क्षय रोग, सिस्टिकर्सोसिसरहाइडाटिडोसिस र टोक्जोप्लास्मोसिस रोगहरुलाई जुनोटिक रोगको प्राथमिकतामा राखिएको डा. पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यस अघिपनि ६ वटा जुनोटिक रोग प्राथमिकिकरण गरेको छ । वर्षेनी जुनोटीक रोगका कारण विश्वमा १ करोड मानिस बिरामी पर्छन भने १० लाखको मृत्यु हुने गरेको छ । रातोपाटीबाट
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा ११ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा कृष्णपुर नगरपालिका-४ क्याम्पस टोल बस्ने ५३ वर्षीय धन बहादुर गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ…